बुद्धिमानी भनाइ सधैं छ मानव अनुभव, संसार र घटना को ज्ञान conveys। - अर्थमा संग अद्यावधिक स्मार्ट कैफियत, प्रत्येक व्यक्ति आफूलाई विषयमा नजिक पाउन सक्नुहुन्छ जसमा। यी शब्दहरू भित्री भावना व्यक्त र यो सामान्य मा भइरहेको र जीवन छ के एक व्यक्तिको मनोवृत्ति वरिपरि ती स्पष्ट बनाउन सक्छ।
अर्थ संग अपडेट, बौद्धिक
"तपाईं सम्झना गर्न सक्दैन केहि सिक्न मौका।"
"विगतमा गर्न खोल्दै, हामी भविष्यमा फिर्ता बारी।"
"मानिसले सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ छ, अझै केही व्यस्त छैन।"
"सफलता को अर्थ -। एक चरम बिन्दु अवस्थित छैन यो गर्न आन्दोलन मा।"
"डर विजेताले आफूलाई केही छैन।"
"असल मानिसले तुरुन्तै देख्न सकिन्छ। यो तिमीलाई भेट्न सबैलाई छ राम्रो भन्छन्।"
"आफ्नो पट्टा पकड अघि गर्दैन भने, त्यो उनको हल्कासित नलिनुहोस् कुनै कारण छ।"
"विचार आउन भावनाहरू राज्य रुचि छैन -। सोचाइ परिवर्तन गर्न आवश्यकता छ।"
"आफ्नो आफूले पछुतो मान्ने, एक ठूलो प्रयास आवश्यक छैन। तर ईर्ष्या गर्न, पसिना हुनेछ।"
"सपनाहरु तिनीहरूले जाने छैनन् भने, सपना र।"
"दुखाइ - विकास चिन्ह।"
"लामो समय एक मांसपेशी फाटो छैन भने, यो atrophies। यसलाई मस्तिष्क छ त्यसैले।"
"यो हृदय हराएको छैन, यो काँध मा कुनै पनि अन्य गिरावट।"
"यो रद्दीटोकरीमा फोहोर फेंक भन्दा राज्य गर्न गुनासो धेरै सजिलो छ।"
जीवनको अर्थ संग मा स्मार्ट अपडेट
"तिमी मेरो जीवन बर्बाद गरेको भन्न गर्नेहरूलाई सुन्न नगर्नुहोस्। आखिर, तिनीहरूले भन्न रूपमा, तपाईं बाँचिरहेका छौं।"
"मानिसको विचारै फारम।"
"कुरा प्रकृति दिएको लागि, उहाँले गाउन सक्नुहुन्छ। यो, त्यो नृत्य गर्न सक्नुहुन्छ जान दिइएको छ।"
"जीवनको अर्थ यो केवल पाउन आवश्यक सधैं त्यहाँ छ।।"
"धन्य मान्छे यहाँ र अब बाँचिरहेका छौं।"
"केवल अनुभव भएको ठूलो घाटा, तपाईं कसरी सानो कुरा ध्यान योग्य महसुस गर्न सुरु गर्नुहोस्।"
"त्यहाँ एक नङ र मान्छे संग :. तिनीहरूले कारण हो बसिरहेका, whined कुकुर बारेमा दृष्टान्त छ, तर यो बन्द प्राप्त गर्न" नङ "हिम्मत छैन।"
"Desperate परिस्थिति अवस्थित छैन।। त्यहाँ समाधान लिन चाहँदैनन् भन्ने हो"
"आनन्द, पछिल्लो बारेमा पछुतो मार्न वर्तमान लागि भविष्यमा र कृतिध्नता को डर।"
"जीवन केही नयाँ आउन, तपाईं उहाँलाई लागि कोठा बनाउन आवश्यक छ।"
"जीवन मान मानव आफु को लागि कुरा।"
"विगतमा, केही परिवर्तन हुनेछ।"
"बदलयो - एक कुकुर प्रतिक्रिया कि खानको जस्तै हो।"
"Chase मात्र ठूलो सपना सडकको दृष्टि गुमाउन छैन भनेर लागि लायक छ।"
अर्थ संग स्मार्ट अपडेट - यो सिर्फ मानिसहरूले उत्पन्न शताब्दीयौंदेखि पुरानो बुद्धिको एक अन्न छ। व्यक्तिगत अनुभव कुनै कम महत्त्वपूर्ण छ। अन्त मा, अनुसार आफ्नै worldview संग कार्य गर्न मानव अधिकार जीवित।
बुद्धिमानी वचनहरू प्रेम बारे
प्रेम, पुरुष र महिला बीच सम्बन्ध subtleties - अर्थ संग अपडेट, चतुर वचनहरू पनि आफूलाई भावना गाउन समर्पित।
"साँचो प्रेम मा, एक आफूलाई बारेमा धेरै सिक्छन्।"
"गरिंदैछ unloved -। यो सिर्फ खराब भाग्य प्रेम होइन -। यहाँ पहाड"
"मात्र कुरा एक व्यक्ति पूर्ण मा सन्तुष्ट हुन सक्दैन, यो प्रेम छ।"
"प्रेम कैद राख्नको लागि छैन, क्षितिज खोल्न पर्छ।"
"प्रेम एउटा मानिस लागि कुनै अन्य समस्या छन्।"
"कुनै एउटा व्यक्ति बुझ्न सक्दैन र रूपमा प्रेम रूपमा धेरै स्वीकार।"
"एक महिला को जीवन मा, त्यहाँ दुई चरणहरु हो: पहिलो, यो त प्रेम गर्न सुन्दर हुनुपर्छ - सुन्दर हुन मनपर्ने।"।
"प्रेम छैन। यो पनि आफैलाई प्रेम गर्न अनुमति गर्नुपर्छ।"
"प्रेम खोज्दै खोजिरहेको गर्ने व्यक्ति हुन भन्दा सजिलो छ।"
"बुद्धिमान् स्त्रीले कहिल्यै अपरिचित अगाडि उनको मानिस scolds।"
मान्छे बीचको सम्बन्ध बारे
अर्थ संग सबै भन्दा यसको स्थिति भाग को लागि, स्मार्ट उद्धरण मानव सम्बन्ध को दुनिया प्रतिबिम्बित। साँच्चै, यो पक्ष सबै समय मा सान्दर्भिक छ र यसको subtleties भरिएको छ।
"तपाईं मान्छे आफ्नो असफलता बारे, अरूलाई बस उत्साहित बताउन सक्छ। एक यो आवश्यक छैन।"
"हुन नहीं लोभी - मान्छे दोस्रो मौका मुर्ख नगर्नुहोस् दिन -। तेस्रो नदेऊ।"
"तपाईंले यसलाई चाहनुहुन्छ नगर्ने कसैले सहायता गर्न सक्दैन।"
"ती आमाबाबुले पैसा भन्दा आफ्नो समय खर्च गर्ने को सुखी छोराछोरी।"
"यदि हाम्रो आशा भेटे थिएनन्, केवल हामीलाई दोष। त्यहाँ उच्च आशा उठाउनु आवश्यक छैन थियो।"
"अर्को व्यक्ति condemning, यो विचार लायक छ - सबै आफ्नै भविष्य सजग छन् कि?"
"उहाँको मान्छे टाढा जाने छैन।"
"छोड्न चाहनेहरूलाई दिनु सक्षम, हुन -। राम्रो मानिस गुणस्तर अर्को विकल्प बनाउन मौका दिनुपर्छ"।
"अन्य आफूलाई भन्दा धेरै सजिलो बुझ्न।"
"आफ्नो आत्म-विश्वास कमजोर गर्नेहरूलाई ध्यान नहीं। यो उनीहरूको समस्या छ। महान् मानिसहरू प्रोत्साहन छन्।"
"यो एक राम्रो मानिस हेर्न, र उहाँको एक नीच विचार भन्दा गल्ती गर्न, र त्यसपछि पछुताउनु धेरै राम्रो छ।"
समर्थक-जीवनको एक अर्थमा संग स्मार्ट अपडेट आवश्यक सामाजिक सञ्जाल मा पोस्ट को लागि प्रयोग गरिएको छैन। तपाईंले यी बयान, आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न सत्यको अन्न पाउन सक्नुहुन्छ अनुरूप लागि आफ्नै राय र चाहना विकास।
"Shpak" के हो? रोचक तथ्य
विधर्मीलाई - यो हुनुहुन्छ? आई Lazhechnikov द्वारा eponymous उपन्यास
स्लट मिसिन संग्रहालय - बाल्यकाल मा एउटा यात्रा। मास्को, सेन्ट पीटर्सबर्ग र कजान मा सोभियत स्लट मिसिन को संग्रहालय कहाँ फेला पार्न?
सिग्मन्ड फ्रेडू: किन महिलाहरु महिलाहरु लाई प्रेम गर्छन्
Hema Malini: Filmography भारतीय अभिनेत्री